Nanganai Jesu | Apg29
Chii unowana pakuparidza evanhu mutemo, Agenda 2030 uye okunze?
Unoziva refu Jesu Kristu achauya zvakare? Moyo wako zvikuru vachifunga matambudziko pano panyika climate matambudziko uye Agenda 2030?
Tiri kurarama nhasi munyika umo tiri kuona vanhu vaigara mwoyo. Uye pandinoverenga Bhaibheri, inoti:
"Character kuratidza pachavo vari zuva nomwedzi nenyeredzi, uye panyika vanofanira marudzi vacharwadziwa kwazvo uye nekukanganiswa; gungwa nemafungu Vanhu vachava kufema vane kutya kutarisira chii chichawira nyika, nokuti masimba okudenga achazununguswa.. unofanira kuona Mwanakomana wemunhu achiuya mugore ane simba nekubwinya kukuru. Asi kana izvi kunotanga kuitika, zvino ruramisa mugosimudza misoro yenyu, nokuti kununurwa kwenyu kuri kuswedera. " Ruka 21: 25-28.
Tikasangana nhasi, vanhu vane mwoyo pamusoro chii chiri kuitika ekunze yedu, uye apo tinokwanisa kuparidza Vhangeri harisi pasi Agenda 2030 kana Climate itsika. Hatifaniri kufunga zvakatipoteredza, Agenda 2030, kana magariro mutemo, asi pfungwa dzedu ndechokuti meso ako Jesu Kristu uye kuuya kwake. Chii unowana pakuparidza evanhu mutemo, Agenda 2030 uye okunze?
Isu sevaKristu havafaniri vanotambura kufunganya sezvo vana dzenyika. Pazvizere mumoyo muromo unotaura kazhinji akati. Unoziva refu Jesu Kristu achauya zvakare? Moyo wako zvikuru vachifunga matambudziko pano panyika climate matambudziko uye Agenda 2030? Jesu akati:
"Asi ngwarira pakupima yenyu pamwe kunwisa, kudhakwa nokufunganya kwoupenyu, kuti zuva iroro pakarepo pamusoro seriva, nokuti kuchachinja zvose vanogara zvose pamusoro penyika. Iva nguva vakamuka uye kunyengeterera simba kutiza zvose kuti vachatitaka kuitika uye kuti mugogona kumira pamberi poMwanakomana woMunhu. "
Pane kutaura nezvinetso zvamagariro, matambudziko okunze uye zvichingodaro, ngatirambei kuparidza pamusoro umambo hwokudenga. Rimwe zuva, Jesu Kristu achauya shure uye kuwana mwenga wake vechokwadi wagadzirira kuti zuva? Kana kuti iwe une zvakawanda simbisa ndiani kwaAntikristu?
The pamuchato yokudenga
Ndinoshuva kuva muwanano yokudenga, uye yangu yakanangana uchava zuva apo Jesu Kristu richabatwa mwenga wake! Muka, iwe uvete nokukurumidza saizvozvo Jesu Kristu Mambo Kings zvakare. Pano pakupera, dzimwe ndima dzeBhaibheri kuverenga uye vanofungisisa.
2 Pettrusbrevet 3: 3-4 Kupfuura zvose, imi mucharangarira kuti mumazuva okupedzisira vaseki vachava, achitungamirirwa nokuchiva kwavo uye vanoseka iwe uye anobvunza kuti: "Ko chivimbiso chekuuya kwake? Madzibaba edu vakatofa, uye zvose zviri sezvo chave kubva pakusikwa kwenyika. "
1 VaTesaronika 5: 2-3 Nokuti imi munoziva kwazvo kuti zuva raIshe rinosvika sembavha usiku. Just kana vanhu vanoti, "Zvose rugare uye akachengeteka," ipapo njodzi sezvo nokukurumidza sezvo kurwadziwa apo mumwe mukadzi uchabereka, uye havangapunyuki.
Mateu 24: 29-30 Pakarepo shure kwekutambudzika kwemazuva iwayo, zuva richasvibiswa, uye mwedzi hauzobudisi chiedza chawo. Nyeredzi dzichawa kubva kudenga, uye masimba okumatenga achazununguswa. Ipapo Mwanakomana woMunhu vatambi kuonekwa mudenga, uye ipapo madzinza ose enyika achachema, uye achaona Mwanakomana wemunhu achiuya mumakore ekudenga nesimba nekubwinya kukuru.
2 Timoti 3: 1-5 uzivewo ichi, kuti mumazuva okupedzisira, nguva yakaoma. Ipapo vanhu vanongozvifunga ivo voga uye mari; Vanova vanozvirumbidza, vanozvikudza, vazvidzi, vasingateereri vabereki, vasingatendi, akaipa, pasina rudo, rwechisikigo, azere nhema, isingadzorwi, utsinye, kwete zvakanaka, vanonyengera, richizvitenda uye vanozvikudza. Vanoda mafaro kupfuura Mwari. Vanotakura uMwari sechinhu chokuzvivanza asi vachiramba simba racho. Muvanzvenge.
Daniel 12: 4 Asi imi, Daniel, chengetai mashoko unamire bhuku kusvikira pakuguma nguva. Vazhinji vachamhanya, uye ruzivo anofanira kuwedzera. "
Ruka 21: 25-26 vachava nezviratidzo pazuva nepamwedzi nepanyeredzi, uye nyika ichava vahedheni nokurwadziwa uye nekukanganiswa; gungwa nemafungu zvichitinhira. Vanhu vachafa kutya mune kutarisira chii zvinouya panyika, nokuti masimba okudenga achazununguswa.
Mateu 24: naizvozvo 42-44 rindai, nekuti hamuzivi nguva Ishe wenyu yaachauya. Imomo uchanzwisisa kuti kana muridzi weimba aiziva nderipi nguva yousiku mbavha akasvika, angadai varambe vakamuka uye iye kubva nokuputsa mumba. Saka nemiwo ivai makagadzirira; nekuti kana iwe wevadukusa aizvitarisira, kana Mwanakomana wemunhu yaachauya.
Mateu 24: 23-24 Kana muri akaudza: Ndimwi Kristu, kana apo, musatenda; Vaponesi venhema navaprofita venhema vachaita zviratidzo zvikuru nezvishamiso, kuti vatsause, kana zvichibvira nevasanagurwa.
1 John 2:18 vana vangu, ichi ndicho nguva. Makanzwa kuti mupikisi waKristu uchauya, nazvino vapikisi waKristu vazhinji vauya. Kubva ichi tinonzwisisa kuti yava nguva yekupedzisira.
Uyu muverengi email, maonero vawane munyori kumiririra.